SanDisk juru anyị anya na kaadị 1 TB SD | Akụkọ akụrụngwa
SanDisk juru anyị anya na kaadị 1 TB SD
N'oge na-adịbeghị anya ndị ọrụ na-enwe ọ seeingụ ịhụ ka ụfọdụ ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ megide ibe ha inye nchekwa nchekwa, ihe ọ bụla usoro ya, a otutu enwekwu ike. Nke a na-enwe mmetụta na ọnụahịa nke na-ada nwayọ nwayọ. Oge a ka m chọrọ ichetara gị nnukwu nsogbu ikpeazụ nke ụlọ ọrụ dịka SanDisk na ọ dị nnọọ mara ọkwa n'oge ememme Photokina 2016 na ha ga-amalite a adịghị anya 1 TB SD kaadị.
Tupu ịmalite mgbịrịgba na ụgbọ elu ahụ, rịba ama na ugbu a anyị na-eche ihu naanị a prototype, n'agbanyeghị nke ahụ, eziokwu bụ na anyị na-eche naanị akụkọ dị egwu n'ihi na, ọ bụrụ na ọ pụta, anyị ga-eche ihu ihe ga-abụ Kaadị nchekwa SD kacha ibu mgbe ịbụ, dịka ị nwere ike ịbụ na ị na-eche echiche, nwee ike karịa ụfọdụ draịvụ ike siri ike, SSD, nke dị ugbu a n'ahịa.
SanDisk na-emepụta ihe ga-abụ, mgbe ọ na-akụ ahịa, nke kachasị kaadị SD nchekwa.
Ihe kaadị SD a bụ nsonazụ oru ha na-arụkọ ọrụ ọnụ SanDisk y Western Digital, nnukwu ụlọ ọrụ ọzọ metụtara ụwa nke nchekwa nke otu afọ gara aga zụtara nke mbụ. Dabere na nkwupụta ahụ ewepụtara na nke a, emebere atụmatụ a iji mejuo ọchịchọ na-eto eto n'ihe metụtara mkpebi ọdịnaya n'ihi na, na mmepe ọhụụ, ọ na-ewe ohere karịa.
O di nwute na n'ihi na anyi na-eche ihu uzo di omimi, ee, eziokwu bu na SanDisk achọghị ịmatakwu ọtụtụ ihe. Banyere ọnụahịa, ekwesiri iburu n'uche na nkeji ndị a anaghị adịkarị ọnụ ala, ihe atụ doro anya bụ na ụdị nke ga-adị n'okpuru kaadị SD a, ụdị nke ikike ya bụ 512 GB, ugbu a na-ere maka $ 799 otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » SanDisk juru anyị anya na kaadị 1 TB SD
oh yeah na nyefe oso?….
Zaghachi Silbestre Macias
N'oge a egosibeghị data a, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ. Echere m na anyị ga-echere.
Opera na-enye ya VPN ọrụ n'efu na ụdị desktọọpụ ya
Nixon na-ewepụta Mission, elekere na-eguzogide ọgwụ na Wear gam akporo